Ciidamada Xoogga oo la wareegay Deegaanka Basra. | allsaaxo online
Ciidamada Xoogga oo la wareegay Deegaanka Basra.
Wararka ka Naga soo gaaraya Degaanka basra oo u dhaxeeyo Magaalooyinka Balcad iyo Afgooye ayaa sheegaya in ciidamada ka baxay degmada balcad G/sh/Dhaxe ay manta la wareegeyn gacan ku haynta Degaankaas oo ay hore u maamulayeen dagaalamyaasha ka tirsan Al-shabaab.
Al-shabaabkii Maamulayey degaanka basra ayaa la sheegay in ay isaga baxeen degaankaasi ,kadibna ay la wareegeen ciidamada ka tirsan Militariga soomaaliya oo ka ambabaxay degmada Balcad, iyadoona wax dagaal uusan dhacin ayey ciidamada si nabad galya ah ula wareegeen deegaankaasi Sida Dadka degaanka ay Allsaaxo u sheegeen.
Dadka degaanka ayaa sidoo kale sheegay in ay ka cabsi qabaan in dagaal uu ka dhaco degaanka Basra.
Degaankan ay qabsadeen ciidamada militariga soomaaliya ayaa dhaca inta u dhaxeeyso degmooyinka Balcad iyo Afgooye oo ka kala tirsan Gobolada Sh/Dhaxe iyo Sh/Hoose,waxaana dhowr jeer degaanka ka dhacday duqeymo lala beegsaday saldhigyo Al-shabaab ay halkaas ay ku la leeyihiin.